अर्को पालीको दानमा नो भोट हुन सक्छ - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
रमेश उप्रेती || 28 May, 2022
मतदान दिएको हातको मसि अझै पानीले पखाल्न सकेको छैन । जब पखालिन्छ भोलीको अनुमान आजको हेरेर गर्ने हो भने उहि परम्परा दाहोरिन्छ होला । फेरी, पाँच वर्षमा हातको औंलामा मसि लगाउन लामबद्ध हुने छौं । निरासा होइन, आसा गर्ने ठाउँ नै छैन । आजसम्मको मतदान साह्रै अन्धविश्वासी भएर अघोरी खोज्दै कालो कपडा, तोरीको तेल, एक माना चामल दान दिए जस्तै मतदान भएको छ ।
सिद्ध अघोरी र सकारात्मक परम्परालाई जोड दिनेको समन्वय नभए जस्तै भएको छ मतदान । हाय तौवा मच्चिएको छ परम्पराको मतदानको प्रकृतिमा खेचरी मुद्राको माध्यमबाट इन्द्रजाल गर्नेहरुको । देवता बनाइएकाहरुबाट दान माग्न आउँदा पनि त्यति विधि लछारपाटो लागेन । अपमानको बदलाको लागि न्याय माग्ने व्यक्ति विशेषको प्रवृत्तिले जादुको काम गरेन । जता दहि त्यतै कृष्ण, जता मख्खन त्यतै कृष्ण, जता गोपी त्यतै कृष्णको दर्शनबाट प्रभावित लोक युद्धको सपनाका सौदागरहरुले मजैले मख्खन चाटेका छन् यसपालि ।
म र मेरो मध्यमवर्गीय भ्रमको आलाप
परम्पराका खानदानीहरुले साँठगाँठमा राम्रै भ्रम छोड्न सफल भए । सवै परम्परावादीहरुले आ–आफ्ना ढङ्गका साँठगाँठ गरेकै हुन् । म परम्परावादी मेरा पितापुर्खाले सधै दिने गरेको ब्राम्हणलाई नै दान दिने छु भन्ने एउटा ठुलै जमात ज्यूदै छ । उसलाई ब्राह्मण खुशी भएकोमा गर्व लाग्छ । उन्मुक्त भई जिन्दावाद गर्छ । उनीहरुलाई महँगीको मारले, विकृतिको भारले, रन्थनाएको छैन जस्तो नाटक गरी केही बोल्दैनन् । किनकी परम्परा खलवलिन्छ । मूल–मुलत्वबाट पर सरेर लहरे पिपलले घरेकोमा लहरे पिपलको छायाँमा रमाउन पल्केका खानदानी विचारहरु, खानदानीवादहरु, लहरे पिपल देखाएर मूल पिपल यही हो भनेर भ्रम छरेका छन् । यसो सोचे सधै नै यस्तै हो त चुनावको कहाली लाग्दो कथा र व्यथा हरु ।
चुनावले कहिले काहि अभिमानीहरुको अभिमान, आफूलाई केन्द्रविन्दु बनाएर मान सम्मान खोजिरहनेहरुलाई कालो पनि पोति दिदो रहेछ । खराब र गलतहरुको भिन्नता छुट्टाउन कठिन भएको छ । धम्कीको राजनीतिलाई पेशा बनाउनेहरु अस्तीत्वको लागि जो जस संग पनि विलय र गठजोड हुदोरहेछ आँखा आगडी नाचिरहेका छन् दृष्यहरु । नीति, विचार, कार्यक्रममा आर्दश नीष्ठाको आधारमा होइन लाखौं कार्यकर्ताको रगत र पसिनाबाट निर्मित भिमकाय शक्ती आफ्नै बुद्धिले क्षतविक्षत हुदा फाइदा लिनेलाई गजवको फाइदा पनि भएको छ । जनताको सहमति, जनताको मतदानलाई आजसम्म ठूला उद्योगीहरुले आ–आफ्ना उद्योग सम्झेका छन् राजनीति व्यापारका लागि । यो परिदृष्यको साक्षि प्रत्येक आवधिक मतदान भएको थियो र छ ।
समीक्षा : जिउने कला र आत्ममार्गका लागि
कहिलेकाही साना व्यापारिले पनि ठूलोको उछित्तो काट्न सक्छन् विगतमा पनि देखिएकै हो अहिले पनि देखिएकै छ । भिडभाड जम्मा भएको देखेर आफ्नो यथार्थ शक्ती क्याडरलाई अलग–थलग गरेपछि विद्रोह या अन्तरघातको शब्दावलीले बजार पाउदो रहेछ । समूह भित्र, संगठन भित्र, विरोधको स्वरलाई अंध विरोधको स्वरलाई अंध विरोधको नाम दिदा छक्का पञ्जाले दुई चार हिउँद त जाला फेरी भिरबाट लड्ने नै हो । आत्ममंथन छदै छैन । आफ्ना स्वार्थका लागि मात्र मंथन छ । आफै चक्रवर्ति राजा हुनका लागि भूरेटाकुरे सामन्त र राजाहरुको आवश्यक परे झै आफु सर्वशक्तिमान हुन भूरेटाकुरे, शक्तिहरुको आवश्कय परे झै आफु सर्वशक्तिमान हुन भुरेटाउकुरे शक्तिहरुको गठजोड र स्तुतीबाट आजन्म सर्वशक्तिमान भइदैन होला ।
नदि किनाराका झुपडीहरु वनको छेउछाउका सुकुम्वासीहरुका घरघरमा, मध्यमवर्गिय, मजदुरहरु, किशानका घरमा विभिन्न लाल, सेता, पहेँला, हरिया झण्डा फहराइरहेका छन् मतदानको उत्सव मनाउनको लागि । कुनै झण्डाले कहिल्यै हेरेनन् खानालाई अन्न, लाउनलाई लुगा, जिउृनको लागि रोजगार, शिक्षा, सफाई, औषधी उपचार पाएको छ कि छैन भनेर ।
मान्छेले बाँचेको आजको परिवेश
जनताकै करबाट उठेको रकमले ३ दिन भोज भतेर गराइन्छ दलित र सुकुम्वासी वस्तिहरुमा । त्यस्ता वस्तीहरुमा मतदानको अघिल्लो २ दिन र मतदानको दिन गजवको खर्च गर्छन् राजनीतिक व्यापारिहरुले । पाउने त्यति नै हो वाकी जसलाई मत दियो उसैले लुट्ने हो । यो मतदानको उत्सवमा पनि ऐतिहासिक परम्परा कायमै रह्यो एउटा दुईवटा अपवाद वाहेक लगभग सातहजारमा उस्तै उस्तै परम्पराको रितिलाई पुर्नताजगी गरियो । कस्तो दान ? सुपात्रलाई दान दिने मन, तर कुपात्रहरुमध्ये एक छान्नु पर्ने, नो मतदान लेख्ने, अधिकार छैन । दान पनि जर्वजस्ती दिने पर्ने यस–यसलाई दान दिनु भनि फर्मान जारी भै उभिएकाहरुलाई दान दिनै पर्ने कस्तो अभ्यास हो यो ।
कूलो बनाउनु छ वादको कुरो छ, हेल्थ पोष्ट स्थापना गर्नु छ वादको कुरो छ, बाटो बनाउनु छ वादको कुरो छ, रोजगारी सिर्जनाको त कुरै छोडौं, सिद्धान्तका लामा लामा भाष्य तयार छन्, वादभित्र गफाडिको गफको संसारमा । एकजना वृद्ध दानीले पिपलबोट मुनि बसि हामीलाई संझाउदै थिए, गणतन्त्र आयो त के लेर आयो ? राजतन्त्र जादैमा गास, वास, कपास, औषधी रोजगारी आयो त ? राजतन्त्र ले पनि केही दिएको थिएन लुट्ने कार्य वाहेक केही गरेन । दुवै दान लिन आतुरहरु हुन् । एक राजालाई राजतन्त्रमा भेट्न गाह्रो, गणतन्त्रमा थुप्रै राजा छन्, भेट्नलाई अलि सजिलो । चारित्रिक मानसिकमा दुवै त्यत्रो अन्तर छैन । म मतदान गर्न जान्छु । कुपात्रलाई मतदान गर्न मन लाग्दैन । हात लटपटिए छ । दिमागले सोचेन, मत त वदर मतदान गरेर आएछु । कतिले नजानेर पनि गर्लान् । वावै उठे गए ।
छोरी अन्माएको घर जस्तो सन्नाटा हरेक शहरका घरहरु
रन्थानायो उनका कुरो ले । साठी वर्षको हाराहारीमा पुग्दा वोकेका चिन्तन, वोकेका दर्शन गलत त लागेन तर भारी लाग्न थाल्यो । चिन्तन र दर्शनको भारी जनमतले वोकी दिनु पर्ने, चिन्तन र दर्शनका ठेकेदारले गलत भाष्य निर्माण गर्दा अहो प्रभु गजवको वाणी निस्कियो भनेर जय–जयकार गर्नु पर्ने यो भाष्य तयार भएको छ । मतदान गर्न आगामी दिनमा चिन्तन र वादलाई होइन निष्ठा र इमान्दारीतालाई । त्यस्ता भेटे दान गर्छु नत्र रमिता हेरेर बस्छु । सके दुई चार जनालाई कान फुक्न खोज्छु आफ्नो विचार व्यक्त गर्न ।
यसैले सत्यम् शिवम् सुन्दरम्
भष्मेश्वर घाट र चिताको आगोको साक्षि मलामी !
दलितहरूको इतिहासमाथि पुनरावलोकन कहिले ? - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
[…] यो पनि…अर्को पालीको दानमा नो भोट हुन सक्छ […]
महाकालीको पानी पाउन नेपालको संघर्ष
महाकाली सन्धि भएको अढाइ दशकपछि महाकाली सिँचाइ आयोजनाले वर्षाको समयमा पानी पाएको छ । पानी पाउन पनि नेपालले ठूलै सङ्घर्ष